ဆောင်းပါး Archives - BuzzFeed Myanmar
သူရဲကောင်းဖြစ်လာသည့် ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်၏ အနာဂတ်
မြန်မာပြည် ဆေးကုသမှုလောက ၊ ထိုင်း ဆေးကုသမှုလောက ဘာတွေကွာနေလဲ !!
မြန်မာပြည်ကဆြာဝန်က ကင်ဆာ တဲ့ ! (၆)လပဲခံမယ် တဲ့ ! (၈၆)နှစ် အဖွားကို operation လုပ်ရမယ်တဲ့ ! ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ အသည်းကို လှီးထုတ်ရမယ်တဲ့ ! (၈၆)နှစ်အရွယ်အဖွားကို operation လုပ်ရင် ဖြစ်လာနိုင်မယ့် Risk ကိုမေးတော့ သူ့ပညာကို စော်ကားတာလားတဲ့ ဆြာဝန်က ! လူနာရှင်မှာ second option တောင် considering လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိ ၊ ကြောက်နေရဒယ် ၊ ဒါနဲ့ပဲ အသည်းကင်ဆာဆိုပြီး ON ထားတဲ့ ဆေးတွေ မသောက်ပဲ ထိုင်းကိုသွားပြီးပြဖို့ရှိတာနဲ့ ခဏဆိုင်းထားလိုက်တယ် တဲ့ ၊ ထိုင်းရောက်တယ် စစ်တယ် ပြတယ် check တယ် ၊ ဘာကင်ဆာမှမရှိပါတဲ့ Result ထွက်လာတယ် ၊ မြန်မာပြည်က (၆)လပဲ ခံမယ်ဆိုတဲ့ အဖွား အခု (၂)နှစ်တိုင်အောင် ကျန်းမာစွာ ရှိနေပါတယ်တဲ့ !
ဗိုလ်တထောင် က စနေမ
အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးမှုတွေ၊ သားဆက်ခြားပညာပေးမှုတွေ အများကြီး လိုအပ်နေပါတယ်နေဒါဏ်မိုးဒါဏ်ကြောင့် ပင်ကိုယ်ထက်ပိုပြီး မဲပြာနေတဲ့ အသားအရေ၊ ပိန်ကပ်ကပ် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ခန့် ရှိတဲ့ မိန်းကလေးငယ်တဦး။ သူဟာ စနေနေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တခုနဲ့ မိဘတွေရဲ့စွန့်ပစ်မှုကို ခံခဲ့ရပြီး လမ်းပေါ်ရောက်မှန်းမသိ ရောက်လာရသူတဦးလည်း ဖြစ်တယ်။
သမ္မတဟောင်း ဦးထင်ကျော် (ဝဲ)၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (အလယ်) နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဟောင်း ဦးဝင်းမြင့် (ယာ)
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ သမ္မတဟာ ခုလိုပဲ နှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိပြီး လွှတ်တော်ဘက်ကနေ နောက်ထပ် သမ္မတ အသစ်တစ်ယောက် ရွေးချယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ လုပ်ကိုင်ပေးရပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ လောကကြီးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပေမယ့် ယနေ့ခေတ်လူငယ်များဟာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာတင် အိမ်ထောင်ရေးလောကထဲကို ဝင်နေကြတာ လွန်စွာနှမြောဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ “အချိန်တန် အရွယ်ရောက်” ဟူသောစကားရှိရာ အရွယ်ရောက်တယ်ဆိုတာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကြီးကောင်ဝင်ခြင်းကိုဆိုလိုပြီး အချိန်တန်တယ်ဆိုတာ ပညာစုံလင်ကာ မိဘကိုလုပ်ကျွေးပြုစုပြီး အိမ်ထောင်ပြုချိန်တန်ပြီလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ “သီးချိန်တန်သီး၊ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်” ဆိုပေမယ့် ယနေ့ခေတ်တွင်မူ “ပွင့်ချိန်တန်သီး၊ သီးချိန်တန်လန်” ဖြစ်နေပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ အရွယ်မတိုင်ခင် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုး(၁ဝ) ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်နေတဲ့ လူငယ်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ အင်တာဗျူး ဟိုတစ်နေ့က ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ လေးစားစရာအချက်တွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲက သူ့အလုပ်အပေါ် ထားတဲ့ ခံယူချက်လေးကတော့ သဘောအကျဆုံးပါပဲ။ အကျိုးအမြတ်ရရုံသက်သက် မဟုတ်ဘဲ သုံးစွဲသူတွေအပေါ် ထားတဲ့စေတနာကို သူ့စကားလုံးတွေကတစ်ဆင့် အထင်းသား မြင်နေရပါတယ်။အဲဒါကိုဖတ်ပြီး ဆက်စဉ်းစားမိတယ်။
အပျိုစင် ဘ၀ဆိုတာကို ဘယ်လိုမြင်ကြပါသလဲ
အဓမ္မပြုကျင့်ခံလိုက်ရသူတွေ ဘာကြောင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ တွန့်ဆုတ်နေသလဲ။ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး ချစ်နယ်ကျွံသွားတယ်၊ တာဝန်မယူဘဲ ထားသွားတဲ့ ယောကျာ်းလေးထက် မိန်းကလေးက ဘာလို့ပိုပြီး ရှက်နေသလဲ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေကို တန်ဖိုးမရှိတော့တဲ့ လူတစ်ယောက်လို ဆက်ဆံနေကြသလဲ၊။
မူလတန်း အရွယ်မှစ လိင်ပညာပေးခြင်းသည် သက်ငယ်မုဒိမ်း ကို လျော့ကျစေမည့် နည်းလမ်းတစ်ခု
“ကျွန်မက အဲဒီလိုကိုင်တာတွေကို မကြိုက်ဘူးလို့ အဒေါ့်ကို ပြန်ပြောပြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဒေါ်က ကိုယ့်ဦးလေးတွေပဲ ကိုင်ပါစေ၊ ဘာဖြစ်လဲဆိုပြီး ပြန်ပြောတယ်။ တစ်ကြိမ်မှာ ကျမအိပ်ယာက နိုးလာတော့ ကျမရဲ့မိန်းမကိုယ်က အရမ်းနာနေပြီး စပ်နေတာ။ ကျမကြောက်ပြီး ထိုင်တောင်မထိုင်ရဲဘူး။ တစ်အိမ်လုံး ပတ်ပြေးပြီး အော်နေခဲ့ရတယ်”ဒေါ်အိအိဖြူက သူငယ်စဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကို ပြောပြခဲ့တာပါ။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် ဦးထင်ကျော် အစိုးရနှစ်ရပ် စွမ်းဆောင်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပါက အလွန်အမင်း သိသာသော ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်မှာ ပညာရေးကဏ္ဍဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေး၊ အခြေခံပညာရေးဟူ၍ ကဏ္ဍအသီးသီးအနက် အထင်ရှားဆုံး တိုးတက်မှုတစ်ရပ်မှာ စတုတ္ထတန်း၊ အဋ္ဌမတန်း အစိုးရစစ်စာမေးပွဲ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် လေးတန်း၊ ရှစ်တန်းအောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းထက် များစွာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိပြီး ဆက်လက်တိုးတက်ဦးမည့် လက္ခဏာများကိုလည်း အထင်အရှား တွေ့နေရသည်။
မုဒိန်းမှုတွေ နဲ့ အမှုပေါင်းစုံ များလာတဲ့ ဒီခေတ်ထဲ လူမှုကွန်ရက်မှာ ဆရာကြီးတွေ အရမ်း လုပ်မနေကြပါနဲ့…
“လုံခြုံရေးအကြောင်း ပြောကြရာဝယ်…” လူမှုကွန်ရက်ထဲမှာ ဆရာကြီးတွေ အရမ်း လုပ်နေကြတယ်မုဒိန်းမှု တမျိုးထဲနဲ့တော့ ဒီလောက်ထိကြီးကျယ်လာလိမ့်မယ် မထင်ဘူးဗျ။ လူသတ်မှု ၊ အနုအကြမ်းစီးမှု ၊ ဓားပြမှု စတာတွေဟာ ဟိုးအရင်ကနဲ့ ယှဉ်ရင် အနည်းငယ် ပိုများလာတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရကောင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကော ဟုတ်လို့လား?ဒါတွေအားလုံးရဲ့ ပင်ရင်း ပြသနာက လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ တလွဲအသုံးချမှုနဲ့ လူတွေရဲ့ ပုံကြီးချဲ့တတ်မှုတွေ ကြောင့်လို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ လူတွေဟာ အပြင်မှာသာ အာကျယ် အာကျယ် မလုပ်ရဲတာ လူမှုကွန်ရက်မှာတော့ သိပ်စွာကြသဗျ။ ဒီမှာ ကျွန်တော် သတိထားမိတာက ဘာလဲဆိုတော့ အပြင်မှာ စဆရက လုပ်ရဲတဲ့ သူတွေက ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ သိပ်မလုပ်ကြတာကို သတိထားမိပြီး အပြင်မှာ မလုပ်ရဲတဲ့ သူတွေက လူမှုကွန်ရက်ထဲမှာ ဆရာကြီးအရမ်း လုပ်နေတယ်ဆိုတာပဲ။